Twin Seoul iimpawu (inkangeleko umphezulu ngaphakathi) kunye nendlela yokufumana?
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Twin Seoul iimpawu (inkangeleko umphezulu ngaphakathi) kunye nendlela yokufumana?
newele Seoul ukufumana [3500 yen yovavanyo lwentsebenzo Free] ukuya oosiyazi yimeko apho ntoni kuqala wayengomnye umphefumlo yahlulwe ezimbini, ukuba oko kunjalo, ezifana isiqingatha umzimba. Kunqabile ukuba ukudibana lo mphefumlo ngamawele, kodwa ukuba uyakwazi ukuhlangabezana ukuba, uya kuhlaselwa yi imvakalelo elingaqhelekanga kolo mzuzu.
njengoko ukuqhubeka ubudlelwane kunye elinye iqela, endiya kuya ukuze uxhamle akukho nto ngayo ngaphambili. Ukuba imiphezulu abangamawele kunye Seoul ikwayinxalenye synchro kunye imbonakalo yakho kunye angaphakathi, kukho kwakhona inxalenye eyahlukileyo ngokupheleleyo. Ukuba ngokucinezela i
ezo zinto, abantu nazo ngoku newele Seoul ukuba ukuthanda Ikeru phambili kwinqanaba ukuba abe umphefumlo omnye ndawonye, ??abantu ukuhlangana ukususela ngoku kuba lula ukufumana phambi kwayo xiang.
umphefumlo komba iimpawu kunye nendlela yokufumana, kwi
indlela yokuqinisekisa Ngoko ke zintoni na iimpawu nendlela yokufumana afumaneka umphefumlo amawele. Ekubeni
umphefumlo iwele ukuba uthanda kakhulu xa wadibana
? na ekuqaleni nogxa wakhe, kunye nabanye bakuthanda kakhulu ukuba xa sidibana okokuqala. It yimvakalelo efana uthando xa uqala, kodwa ibonakaliswa ubukho sele ngokwam uthando nje.
? rate synchro liphezulu
amawele Seoul, kuvamile nokuziphatha becinga ukuba synchro kuba omnye ekuqaleni. Okanye ngengozi wabalekela xa ndicinga Kwelinye iqela, okanye nangokuhamba isidlo nencoko ziyafana, ezifana okanye nokucinga into enye ngexesha elinye, synchro emangalisayo kwenzeka omnye emva komnye.
? ubuntu umphefumlo iwele ukuba uyayazi okwahlukileyo idla
1 eyodwa umphefumlo, ubuntu nguye na umfanekiso onamandla into efanayo, enyanisweni leyo ntonje okwahlukileyo. kuphela Kwakhona ukusuka kwindawo ezahlukeneyo nabo bakhula, khona iinxalenye ezingahambelaniyo. Kodwa ke, yenye msebenzisi ukwamkela engaqhelekanga nokuba ngelo nesabelo.
umphefumlo ngamawele, maxa wambi ukuze alwe xesha, kodwa umthanda kakhulu ukwazi omnye komnye, yaye loo ubuntu babotshwe izandla neenyawo, loo mvakalelo ukunyuka ukuba abafuni kuphulukana iqela ukusuka amava elidlulileyo yi, kusenokuba ukubuyiselana ngelo xesha. Kwakhona kuba kunokwenzeka ukuba sisitya intlungu enjalo ngokungafaniyo iqabane umphefumlo, bekuya kuba luphawu komphefumlo amawele yobudlelwane.
? Kukho akukho emzimbeni ayithethi ukuba kukho ezininzi
iyonke look-ngokufanayo efana, kodwa kuqhelekile ukuba amanye amalungu omzimba ziyafana. Umzekelo, izandla neenyawo yefom, ezinye iinxalenye ebusweni, ufana adla okanye birthmark kwendawo. Ukongeza, u mzekelo lungabonakala ukuba kuyafana lo mkhwa iinwele.
nabo apho, kodwa kufuneka
umphefumlo komba iimpawu ukuba ukoyisa ubunzima, loo nto iya kuba nofifi enkulu ukufumana xa loo mntu. Ubudlelwane phakathi kwabantu kwezi mpawu kwakhona buhlungu ukuba ngelo xesha, kodwa kubalulekile ukufumana phezu kwayo ukuya ezinye kuphakamisa nganye nganye enye.
Kuyinto eqhelekileyo ukuba abanye amalungu omzimba ziyafana. Umzekelo, izandla neenyawo yefom, ezinye iinxalenye ebusweni, ufana adla okanye birthmark kwendawo. Ukongeza, u mzekelo lungabonakala ukuba kuyafana lo mkhwa iinwele.